Namhlanje, ndizokwazisa ngendlela yokwenza le popcorn yoqobo. Ilula kakhulu kunokuba ucinga.
Zimbini kuphela okanye zontathu iintlobo zemathiriyeli ekrwada efunekayo, kwaye unokwenza iipopcorn ezahlukeneyo ngokokhetho lwakho.
Ukulunywa kukuqhekeka, ukubukela imovie bhrashi yedrama yokutya okutyiwa kubalulekile, i-caramel incasa kamnandi ngakumbi.
1. Lungisa iinkozo zombona kunye neoyile yokupheka efunekayo ukwenza iipopcorn zokuqala kwangaphambili. Iinkozo ezincinci zombona esizisebenzisayo ngeli xesha zenziwe njengebhabhathane, kwaye abantu abaninzi abazukuzithenga ngokukodwa. Ukuba abakwazi ukuzithenga, kulungile ukubuyisela iinkozo zombona eziqhelekileyo endaweni yazo. Okokuqala kukubeka ingqolowa emanzini abalekayo ihlanjwe iphindaphindwe, icocekile, ubuncinci bamanzi okuvuza kwenkunkuma, beka ecaleni.
2. Thatha ipani yentsimbi ecocekileyo engenazingcingo (ngokukhethekileyo ngaphandle kwentonga) ngaphandle kwamanzi neoyile, kunye nomlilo ovulekileyo wokufudumeza ipani.
3. Ukuba ufuna ukusebenzisa ibhotolo, yithathe ibhotolo efrijini ngaphambili uyinyibilikise kubushushu begumbi. Emva kokuba i-oli ishushu, ungagalela yonke ingqolowa eyomileyo embizeni, kwaye usebenzise umhlakulo womthi ukuyiguqula ngokuqhubekayo, kuba umphezulu wengqolowa awugutyungelwanga ngokupheleleyo ngeoyile, ke kulula ukunamathela emazantsi imbiza.
4. Kancinci, iqondo lobushushu embizeni liyaqhubeka ukunyuka, kwaye iinkozo zombona ziya kugqabhuka xa zivutha kubushushu obuphezulu. Xa usiva isandi sikaZila kwaye ubona umphezulu uqhekekile, ungayigubungela imbiza.
5. Awunakho ukuvula isiciko rhoqo emva kokuba ugqume ipani, ke kufuneka uyishukumise ipani amaxesha ngamaxesha. Kwelinye icala, ukushukumisa amazantsi epani rhoqo kungathintela ukwenzeka kokuncamathela epanini, kwelinye icala, kunokwenza ingqolowa ibashushu ngokulinganayo ngaphandle kokuhlala kwindawo enye.
Lindela imizuzwana embalwa, ngesiciko esivulekileyo unokubona ingqolowa iphelele kuqhushumbo, ungeva ukuba sisiphi isandi esinokucima umlilo ukuvula isiciko. Ibhotolo ingasetyenziselwa ukwenza i-caramel flavour. Beka umaleko wephepha elinobungqina beoyile kwisitya esincinci kwaye mayipholile kancinci kubushushu begumbi ukuze ufumane ipopcorn ecekeceke.
Egqithileyo I-Bear Sesame Popcorn ezingxoweni
Okulandelayo: I-GMO yasimahla yamaTshayina popcorn INDIAM
I-China ikwelwe ukuba yenziwe Igumbi lokufundela, Iiparcorn zeCaramel, INDIAM popcorn, Amaqhashu,